Malawi: Wɔama Mmofra a Wɔpam Wɔn Fii Sukuu Esiane Wɔn Ahonim Nti No Kwan Ama Wɔasan Aba
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Armenian Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitumbuka Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Fijian Finnish French Georgian German Greek Hausa Hungarian Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Myanmar Norwegian Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Romanian Russian Serbian Serbian (Roman) Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Thai Tswana Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Wɔpam Yehowa Adansefo Mmofra Mmienu Bi Fii Sukuu Mu Esiane Wɔn Ahonim Nti, Nanso Wɔasan Agye Wɔn
Audio Baabi a wubetumi atwe nneɛma abɔ atie Wɔpam Yehowa Adansefo Mmofra Mmienu Bi Fii Sukuu Mu Esiane Wɔn Ahonim Nti, Nanso Wɔasan Agye Wɔn
LILONGWE, Malawi​—May 3, 2017 mu no, wɔsan gyee Aaron Mankhamba a wadi mfe 18, ne Hastings Mtambalika a wadi mfe 15 wɔ sukuu mu. Wɔn sukuu no din de Khombe Primary School. Wɔyɛ Yehowa Adansefo mmofra, na esiane sɛ wɔanto ɔman dwom wɔ sukuufo mu nti, wɔpam wɔn fii sukuu mu. Efi February 13, 2017 na wɔpam wɔn sɛ mma wonsi sukuu hɔ bio. Bere a mmofra no awofo ne anuanom bi a wofi Yehowa Adansefo ɔfese a ɛwɔ Malawi no de asɛm no kɔdan sukuu no mpanyimfo no, wɔsan gyee mmofra no wɔ sukuu hɔ.
Bere a wɔreka asɛm no, nea ɛboaa anuanom no pa ara ne nkrataa mmienu bi a efi Malawi aban no hɔ a wɔde kyerɛɛ sukuu mpanyimfo no. Wɔkyerɛw krataa no baako wɔ afe 1997 mu kɔmaa Yehowa Adansefo a wɔwɔ Malawi. Emu no, wɔkyerɛe sɛ aban no agye atom sɛ ɛnsɛ sɛ wɔhyɛ Yehowa Adansefo sɛ wɔnto ɔman dwom. Krataa a ɛka ho no, wɔkyerɛw no afe 2017 mu. Ɛno nso hyɛɛ sukuu mpanyimfo nyinaa nkuran sɛ wɔnhwɛ na fahodi a sukuufo wɔ sɛ wɔpaw ɔsom a wɔpɛ no, wɔantiatia so.
Hastings kyerɛɛ mu sɛ, bere a wɔsan gyee wɔn no, na ɛyɛ bere pa pa ara, efisɛ na aka kakra ama wɔakyerɛw sɔhwɛ a wɔyɛ no ɔman no mu no. Ɔkaa sɛ: “Ná ɛhaw yɛn pa ara sɛ yɛrentumi nkyerɛw sɔhwɛ a wɔyɛ wɔ ɔman no mu no bi. Saa sɔhwɛ yi, wɔkyerɛw no pɛnkoro pɛ afe biara.” Sɛ sukuuni bi antwa saa sɔhwɛ no a, na ɔbɛka n’anan mu.
Augustine Semo yɛ kasamafo ma Yehowa Adansefo a wɔwɔ Malawi. Ɔkaa sɛ: “Sukuufo yi ani agye sɛ wɔakyerɛ obu wɔn wɔ gyinae a wɔn ahonim nti wosii no ho. Yɛda sukuu mpanyimfo no ase sɛ wɔkyerɛɛ obu maa fahodi a obi wɔ sɛ ɔpaw ɔsom a ɔpɛ no, na yɛda wɔn ase sɛ wɔasan agye sukuufo yi wɔ sukuu no mu bio.”
Share Share Wɔpam Yehowa Adansefo Mmofra Mmienu Bi Fii Sukuu Mu Esiane Wɔn Ahonim Nti, Nanso Wɔasan Agye Wɔn